Fanadinana bakalorea :: Nitombo isa ireo mpiadina niala an-daharana tamin’ny fihodinana faharoa • AoRaha
Fanadinana bakalorea Nitombo isa ireo mpiadina niala an-daharana tamin’ny fihodinana faharoa
Nihamaro ireo mpiadina nisafidy ny tsy hanohy ny fihodinana faharoa tamin’ny fanadinana manokana Bakalorea intsony tamin’
ny herinandro lasa teo. Ho an’ny foibem-panadinana lisea maoderina Ampefiloha na LMA, ohatra, dia nahatratra sivy amby telopolo ireo tsy nandray anjara intsony tamin’ ny laza adina, ny sabotsy. Notsiahivin’ireo lehiben’ny foibem-panadinana teny an-toerana fa nitombo hatrany ireo mpianatra no tsy nanohy ny fanadinana nandritra an’iny fihodinana faharoa iny.
“Nihena hatrany ny isan’ireo mpiadina nanatrika ny fanadinana. Tafakatra fito amby telopolo amby zato ny isan’izy ireo raha valo amby sivifolo izy tamin’ny andro voalohany”, hoy ny lehiben’ ny foibem-panadinana iray hafa, mbola tamin’ny sabo­tsy lasa teo. Ny sokajy A2 no betsaka tamin’reo mpiadina tsy nandray anjara hatramin’ ny andro farany, izay mahatratra valo amby fitopolo
tamin’ireo fito amby telopolo sy valonjato nisoratra anarana.
Nambaran’ireo mpianatra fa sarotra ny fanadinana bakalorea andiany faharoa, satria tsy araka ny niheve­ran’izy ireo azy. “ Tena nana­hirana avokoa ny taranja rehetra. Nihevitra aho fa ny laza adina tamin’ny andro voalohany ihany no sarotra, saingy hatramin’ny farany no tena nahatsapana an’ilay tsy fahampian’ny fotoana nio­manana. Ny taranja frantsay sy ny tantara sy joegrafia ihany no toa azoazo”, hoy i Manitra , mpiadina tetsy amin’ny LMA sady kivikivy.
Tsiahivina fa tamin’ny sabotsy lasa teo no nifarana ny fanadinana Bakaloera fihodinana faharoa mano­kana. Anio no hanomboka ny fitsarana. Vinavinaina hivaly amin’ny faran’ity herinandro ity na amin’ny fiandohan’ny herinandro izany, araka ny fanazavana avy
amin’ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa.